ဆာဘား - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆာဘား ( မလေး အသံထွက်: [saˈbah] )သည် ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်းခရိုင် ဘော်နီယို ကျွန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ဆာဘားသည် မလေးရှားအနောက်တောင်ဘက် ဆာရာဝပ် ပြည်နယ်နှင့်တောင်ဘက်တွင် အင်ဒိုနီးရှား ၏ ကာလီမန်တန်ဒေသနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ Labuan ၏ ဖက်ဒရယ်နယ်မြေ သည် ဆာဘားကမ်းခြေအလွန်တွင်တည်ရှိသည်။ ဆာဘား သည်အနောက်ဘက်တွင် ဗီယက်နမ် နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သည်မြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်တွင်ရေကြောင်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ Kota Kinabalu သည်ပြည်နယ်၏မြို့တော်၊ ပြည်နယ်၏စီးပွားရေးအချက်အချာနေရာနှင့် ဆာဘား ပြည်နယ်အစိုးရ၏ နေရာဖြစ်သည်။ Sabah ရှိအခြားအဓိကမြို့ကြီးများမှာ Sandakan နှင့် Tawau တို့ဖြစ်သည်။ မလေးရှားတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုအရပြည်နယ်လူ ဦး ရေမှာ ၃,၅၄၃,၅၀၀ ဖြစ်သည်။  Sabah တွင်အပူပိုင်း မိုးသစ်တောများ နှင့်တိရစ္ဆာန်များနှင့်အပင်မျိုးစိတ်များပေါများသော အီကွေတာရာသီဥတုရှိသည် ။ ပြည်နယ်သည်အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်ရှည်လျားသော တောင်တန်းများ ရှိပြီး Crocker Range National Park ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Kinabatangan မြစ် သည်မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယအရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်သော Sabah နှင့် Kinabalu တောင်တန်းများ ကို ဖြတ်၍ စီးဆင်းသည် Sabah ၏အမြင့်ဆုံးနေရာနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံဖြစ်သည်။
နာမည်ပြောင်(များ): Negeri Di Bawah Bayu
ဆောင်ပုဒ်: Sabah Maju Jaya
အထိမ်းအမှတ်သီချင်း: Sabah Tanah Airku
၇၃,၉၀၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၈၅၃၄ စတုရန်းမိုင်)
0.702 (medium) (13th)
ST, STA, SW (Tawau)
Borneo မြောက်ပိုင်း၏နယ်မြေအပြောင်းအလဲ ၁၅၀၀ မှ ၁၉၀၅ အထိ။
ပဉ္စမမြောက် ဆူလတန်ဘုရင် ၏နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်း Bolkiah 1485 နှင့် 1524 အကြား, အ Sultan ရဲ့ thalassocracy မြောက်ပိုင်းဘော်နီယိုနှင့်ကျော်တိုးချဲ့ Sulu ကျွန်းစု ဝေးသကဲ့သို့, Kota Seludong (ကျြမှောကျခတျေ မနီလာ က၎င်း၏နှင့်အတူ) ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု ဝေး၏အဖြစ်တိုးချဲ့ Banjarmasin,  ဆည်းပူးနေ ပေါ်တူဂီသို့မလက္ကာကျသွား ပြီးနောက်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှု၏အားသာချက်။   ၁၅ ရာစုတွင်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံသိမ်းပိုက်ပြီးနောက် မှစ၍ ဘရူနိုင်းမလေးလူမျိုးများသည် ဆာဘားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။  ပြည်တွင်းရေးပ,ိပက္ခ၊ ပြည်တွင်းစစ်၊ ပင်လယ်ဓားပြမှုနှင့် အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံများရောက်ရှိလာခြင်း တို့ကြောင့်ဘရူနိုင်းအင်ပါယာသည်စတင်ကျဆင်းလာသည်။ ဘရူနိုင်းသို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လာရောက်လည်ပတ်သည့်ဥရောပသားများသည်ပေါ်တူဂီလူမျိုးများဖြစ်ပြီးထိုအချိန်ကဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၏မြို့တော်ကို ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများ ဝိုင်းရံထားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ၁၅၂၁ တွင် ဖာဒီနန်မက်ဂျလန် သေဆုံးပြီးမကြာမီတွင်သူ၏စူးစမ်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်မြောက်ပိုင်းအစွန်အဖျားရှိ Borneo ရှိ Balambangan နှင့် Banggi ကျွန်းများသို့ရွက်လွှင့်သွားသောအခါစပိန်တို့ကလိုက်ကြသည်။ နောက်ပိုင်း ၁၅၇၈ ခုနှစ် Castilian စစ်ပွဲတွင် နယူးစပိန် မှရွက်လွှင့ ်၍ မနီလာကိုဘရူနိုင်းမှသိမ်းယူခဲ့သော စပိန် သည်ဘရူနိုင်းအားစစ်ပွဲကိုမစွန့်ခွာမီခေတ္တသိမ်းပိုက်ခြင်းဖြင့်မအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။   စူလူးဒေသသည် ၁၅၇၈ တွင်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီးသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စူလတန်နတ် ကို Sulu ၏ Sultanate ဟုခေါ်သည်။ 
လက်ဝဲ: ပထမဦးဆုံးလိုက်လျောစာချုပ်ဆူလ်တန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဒူလ် Momin 29 ဒီဇင်ဘာလတွင် 1877. အပေါ်ဘရူနိုင်း၏
</br> ညာဘက်: အဆိုပါဒုတိယလိုက်လျောသဘောတူစာချုပ် 22 ဇန်နဝါရီ 1878. အပေါ် Sulu ၏ Sultan Jamal ul-Azam ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် 
၁၈၈၂ မှ ၁၉၄၈ အတွင်း ဗြိတိသျှမြောက်ပိုင်းဘော်နီယို အလံ။
၁၈၄၆ တွင် Sabah ၏အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိ Labuan ကျွန်းကိုဘူရွန်မှ Sultan က Labuan စာချုပ်အရ ဗြိတိန်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ၁၈၄၈ တွင် ဗြိတိသျှ Crown ကိုလိုနီ ဖြစ်လာခဲ့သည်။  ဘရူနိုင်းရှိအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ကလော့ဒ်မောရှေသည် Labuan တွင်ဗြိတိသျှတို့တည်ရှိမှုကိုတွေ့မြင်ပြီးနောက် ၁၈၆၅ တွင်ဘော်နီယိုမြောက်ပိုင်းရှိမြေကွက်တစ်ကွက်အတွက်ဆယ်နှစ်ငှားရမ်းခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်မောရှေသည် အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သော Borneo ၊ ဂျိုးဇက်ဝီလျံ Torrey နှင့် သောမတ်စ်ဘရက်ဒလီဟာရစ် တို့ပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။  ကုမ္ပဏီသည် Kimanis ကို (Ellena ဟုအမည်ပြောင်းပေးသည်) ကိုရွေးချယ်ပြီးထိုတွင်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုစတင်တည်ဆောက်သည်။ ယူအက်စ်အစိုးရ၏ဘဏ္financialာရေးထောက်ပံ့မှုအတွက်တောင်းဆိုမှုများသည်အချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမထွက်ခွာမီတွင် Torrey သည်သူ၏အခွင့်အရေးအားလုံးကိုဟောင်ကောင် ဗွန် Overbeck ရှိဩစတြီးယားကောင်စစ်ဝန်ထံရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ Overbeck ထို့နောက်ဘရူနိုင်းသို့သွား။, သူက လိုက်လျော သက်တမ်းတိုးဖို့ Temenggong တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံသည် Borneo မြောက်ပိုင်းရှိနယ်မြေအားလုံးကို၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှပေးအပ်ရန်သဘောတူခဲ့ပြီး Sultan သည်နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ ပေးဆောင်ရပြီး Temenggong ကဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်။ 
ယူနိုက်တက်စတိတ် ကွန်ဂရက်စာကြည့်တိုက် မှ ၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင် အက်ဒွပ်စတန်းဖို့ဒ် မှဗြိတိသျှမြောက်ပိုင်းဘော်နီယို၏မြေပုံ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်တို့ရေးဆွဲခဲ့သော ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင်ဘာ နီယို ၏ သိမ်းပိုက်မှု မြေပုံကို ဂျပန်အက္ခရာများဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။
Monsopiad ယဉ်ကျေးမှုကျေးရွာတွင် Papar Kadazan ၏ Sumazau အကအက။
ဓား တစ်ချောင်း ဟာ မုန့်ဖုတ်ပေါင်မုန့် ပါရှိသည်
↑ Mengenai Sabah (in Malay)။ Sabah State Government။ 19 May 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ About Sabah။ Sabah State Government။ 20 May 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ The Meaning of the Sabah State Crest။ Sabah State Government။ 10 June 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lagu-Lagu Patriotik (in Malay)။ Sabah State Government။ 20 May 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Sabah @aGlance။ Department of Statistics, Malaysia။ 29 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Total population by ethnic group, administrative district and state, Malaysia။ Department of Statistics, Malaysia (2010)။ 27 February 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Subnational Human Development Index (2.1) [Sabah – Malaysia]။ Global Data Lab of Institute for Management Research, Radboud University။ 12 November 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Helmer Aslaksen (28 June 2012)။ Time Zones in Malaysia။ Department of Mathematics, Faculty of Science, National University of Singapore။ 21 May 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Postal codes in Sabah။ cybo.com။ 17 August 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Postal codes in Semporna။ cybo.com။ 17 August 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Area codes in Sabah။ cybo.com။ 17 August 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ State Code။ Malaysian National Registration Department။ 19 May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Teh Wei Soon (23 March 2015)။ Some Little Known Facts On Malaysian Vehicle Registration Plates။ Malaysian Digest။ 8 July 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Population by States and Ethnic Group။ Department of Information, Ministry of Communications and Multimedia, Malaysia (2015)။ 12 February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rozan Yunos။ "How Brunei lost its northern province"၊ 21 September 2008။ 28 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 June 2014။
↑ The Report: Sabah 2011။ Oxford Business Group။ 2011။ pp. 10–143။ ISBN 978-1-907065-36-1။
↑ Kate McGeown။ "How do you solveaproblem like Sabah?"၊ BBC News၊ 24 February 2013။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 July 2016။
↑ Graham Saunders (2002)။ A history of Brunei။ Routledge။ pp. 40–။ ISBN 978-0-7007-1698-2။ 26 May 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ P. M. Holt။ The Cambridge History of Islam: Volume 2A, The Indian Sub-Continent, South-East Asia, Africa and the Muslim West။ Cambridge University Press။ pp. 129–။ ISBN 978-0-521-29137-8။
↑ Barbara Watson Andaya။ A History of Early Modern Southeast Asia, 1400–1830။ Cambridge University Press။ pp. 159–။ ISBN 978-0-521-88992-6။
↑ Rozan Yunos။ "In search of Brunei Malays outside Brunei"။ 28 December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Keat Gin Ooi (2015)။ Brunei: History, Islam, Society and Contemporary Issues။ Routledge။ pp. 22–110။ ISBN 978-1-317-65998-3။
↑ Jatswan S. Sidhu။ Historical Dictionary of Brunei Darussalam။ Scarecrow Press။ pp. 53–။ ISBN 978-0-8108-7078-9။
↑ Ring။ International Dictionary of Historic Places: Asia and Oceania။ Taylor & Francis။ pp. 160–။ ISBN 978-1-884964-04-6။
↑ "Sabah and the Sulu claims"၊7March 2013။ 20 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 June 2014။
↑ History of Sabah။ Sabah Education Department။ 14 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Robert Fitzgerald။ The Rise of the Global Company: Multinationals and the Making of the Modern World။ Cambridge University Press။ pp. 75–။ ISBN 978-0-521-84974-6။
↑ Bachamiya Abdul Hussainmiya (2006)။ Brunei: revival of 1906 :apopular history။ Brunei Press။ ISBN 978-99917-32-15-2။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆာဘား&oldid=727863" မှ ရယူရန်
၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။